Sony 32-Inch Full HD LED Smart TV KDL-32R300D (Black) ~ ICT.com.mm
HomeSony 32-Inch Full HD LED Smart TV KDL-32R300D (Black)
Sony 32-Inch Full HD LED Smart TV KDL-32R300D (Black)
Sony မှ ထုတ်လုပ်ထားသည့် 32″ အရွယ်အစားရှိ Full HD LED Smart TV (အနက်ရောင်) ဖြစ်ပါသည်။ Screen Resolution – 1366×768 p ရှိပြီး Screen Display အမျိုးအစားမှာ LED အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ Open Baffle စပီကာကို အသုံးပြုထားပြီး Standard, Music, Cinema, Game နှင့်... [Learn more]
Brand: SONYSKU: 132839N/ASee more: Lifestyle, New Arrivals, Products, Sony, TV & EntertainmentFilter by: outofstock, Televisions
Sony မှ ထုတ်လုပ်ထားသည့် 32″ အရွယ်အစားရှိ Full HD LED Smart TV (အနက်ရောင်) ဖြစ်ပါသည်။ Screen Resolution – 1366×768 p ရှိပြီး Screen Display အမျိုးအစားမှာ LED အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ Open Baffle စပီကာကို အသုံးပြုထားပြီး Standard, Music, Cinema, Game နှင့် Sports စသည့် အသံစနစ်များ ပါဝင်ပါသည်။ ကြည်လင်ပြတ်သားသည့်ပုံရိပ်များအား ပြသပေးနိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားပြီး ဝေဝါးမှုမရှိအောင် Clear Resolution Enhancer Technology ကို ထည့်သွင်း အသုံးပြုပေးထားပါသည်။ အသံစနစ် ကောင်းမွန်ဖို့အတွက် Dolby Digital Technology ကို အသုံးပြုထားပြီး အသံပြန့်နှံ့မှုကောင်းမွန်သည့် Multi-Dimensional Surround Sound Effect ပါဝင်ပါတယ်။ Clear Phase Sound နည်းပညာပါဝင်တဲ့အတွက် မလိုလားအပ်တဲ့နောက်ခံအသံဆူညံမှုတွေကို လျှော့ချပေးနိုင်တာကြောင့် ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ အသံကိုပဲ ကြားရစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Laptop, USB, Stereo, Player နဲ့ စပီကာတွေကို ချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက် USB, HDMI, Optical, AV Component, 3.5mm speaker jack ပေါက်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
Screen Size: 32″, Display Resolution: 1366×768 p, Display Type: LED, Video Signal: 1080/24p(HDMI only),1080/60i,1080/60p,1080/50i/1080/50p, Speaker Type: Open Baffle Speaker, Sound Modes: Standard,Music,Cinema,Game,Sports, Audio Output: Optical, 3.5 mm Jack, HDMI Port:2Ports, Power Consumption: 37 W, Dimensions: 73.5*46.1*16.8 cm, Weight: 4.8 kg
Sharp Images with HD Resolution and Clear Resolution Enhancer Technology
Sony equips this TV with the ability to perfect images, minimize blur, blur to bring you the most realistic frames.
Multi-Dimensional Surround Sound Effect with Dolby Digital Technology
In addition, the TV is equipped with Clear Phase sound technology that filters out background noise for clearer sound.
Connect TV to Laptop, USB, Stereo, Player, Speaker
On Sony R300D TVs, you can use common connectors such as: USB, HDMI, Optical, AV Component, 3.5mm speaker jack.